Honor V20: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Honor V20: Ilay finday avo lenta vaovao misy fakan-tsary ao anaty efijery
Taorian'ny herinandro niaraka tamin'ny honohono maro be, ny Honor V20 dia naseho tamin'ny fomba ofisialy. Ny fitaovan'ny marika sinoa no maodely vaovao miaraka amina fakantsary tafiditra ao anaty efijery, izay niresaka momba izany tamin'ny tranga taloha. Io no telefaona Android fahatelo tonga miaraka amin'ity endri-javatra ity. Tonga aorian'ny Huawei Nova 4 ary ny Samsung Galaxy A8s.
Ity Honor V20 Izy io dia aseho ho maodely ho an'ny avo lenta. Telefaona mahery izy io, miaraka amina famaritana tsara sy famolavolana mampanantena fa hisy fironana mandritra ny taona ho avy amin'ny Android. Tsy isalasalana fa modely izay tadiavin'ilay marika hanohy hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Tao anatin'izay herinandro lasa izay izahay dia efa nahazo ampahany tamin'ny pitsopitsony an'ity haavo avo lenta an'ny marika sinoa ity. Ka efa afaka nahazo ny hevitr'izay azontsika antenaina amin'izany isika. Fa izao kosa dia ofisialy. Lazainay aminareo rehetra momba ity modely vaovao ity miaraka amin'ny fakan-tsary etsy ambany.
1 Famaritana voninahitra V20
Famaritana voninahitra V20
Ny famolavolana ny telefaona dia iray amin'ireo lafiny lehibe amin'izany. Ny fakan-tsary voalohany dia nampidirina tao amin'ny efijen'ity Honor V20. Izy io dia amin'ny alàlan'ny lavaka malina eo ankavanan'ny farany. Araka izany, tsy tokony hampiasa notch ianao. Ireto ny andinindininy feno amin'ny telefaona:
efijery: 6,4 santimetatra miaraka amin'ny famaha Full HD + sy ny tahan'ny 19.25: 9
processeur: Kirin 980 dia niasa tamin'ny 2,6 GHz
Fakan-tsary Rear: MP 48 misy aperture f / 1.8 ary sensor 3D TOF
Fakan-tsary eo aloha: MP 25 miaraka amin'ny vava f / 2.0
bateria: 4.000 mAh miaraka amin'ny fiampangana haingana an'ny SuperCharge
Azontsika atao ny mahita fa mamela antsika vitsivitsy ity Honor V20 ity famaritana mendrika maodely avo lenta. Ny marika sinoa dia tsy te hitandrina amin'ny kalitao. Azontsika atao koa ny mahita fa ny fakana sary dia zavatra iray izay nohajaina manokana tamin'ity maodely ity. Na ny fakantsary anoloana sy aoriana dia mamela anao hahatsapa ho tsara.
Ny ao aoriana dia fakantsary tokana 48 MP. Ao amin'ny tsena izay fahita matetika ny mahita maodely misy fakan-tsary avo roa heny, telo na quadruple aza, dia gaga ny marika sinoa amin'ny fanapaha-keviny. Miloka amin'ny solomaso tokana izy ireo, izay manana sensor 3D ihany koa. Be ny antenaina amin'izany.
Ho fanampin'izay, aseho ho maodely mahery izy io. Ao anatiny no misy an'i Kirin 980, izay no processeur tsara indrindra ananan'ny tsena sinoa eny an-tsena ankehitriny. Ka amin'ity lafiny ity dia hanolotra fahombiazana tsara ho an'ny mpampiasa izy. Safidy roa no aseho amin'ny resaka RAM, samy manana tahiry anatiny 128 GB. Toerana malalaka ho an'ny mpampiasa.
Ny bateria Honor V20 dia 4.000 mAh, fahaiza-manao tsara izay tokony hanome ny mpampiasa fizakantena ampy. Indrindra raha heverintsika fa ny processeur izay ananan'ny telefaona ao anatiny. Miaraka amin'ity fitambarana ity, dia tokony ho ampy hahafahan'ny mpampiasa manana fizakantenan-tena hampiasaina isan'andro.
Amin'izao fotoana izao, toy ny mahazatra amin'ny telefaona marika Sinoa hafa, ny fanombohany dia nohamafisina tao amin'ny firenena aziatika ihany. Tsy manana fampahalalana momba ny fandefasana azy any Eropa izahay. Azo inoana fa havoaka izy io, saingy tsy maintsy hiandry izany isika amin'ny volana voalohan'ny taona 2019. Nefa manantena izahay fa hiteny bebe kokoa momba izany ny marika. Ho tonga ao amin'ny magazay amin'ny loko roa izy io, izay ho manga sy mainty.
Araka ny efa nolazainay taminao, misy kinova roa amin'ity Honor V20 ity izay efa natolotra. Ny vidinao any Sina, miaraka amin'ny fanovana azy ireo ho euro, dia ireto manaraka ireto:
Dikan-teny misy 6GB / 128GB: 2.990 380 yuan (eo ho eo amin'ny XNUMX Euros novaina)
Dikan-teny misy 8GB / 128GB: 3.490 yuan (eo ho eo amin'ny 445 euro hanovana)
Manantena izahay fa hanana vaovao momba ny fandefasana ity maodely ity any Eropa atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Honor V20: Ilay finday avo lenta vaovao misy fakan-tsary ao anaty efijery